Ndezvipi Beautiful dzoushe In Europe | Chengetedza Chitima
musha > Famba Europe > Ndezvipi Beautiful dzoushe In Europe
Rovedza Kufamba Austria, Rovedza Kufamba Belgium, Rovedza Kufamba Britain, Rovedza Kufamba France, Rovedza Kufamba Germany, Chitima Kufamba Luxembourg, Famba Europe
Maguta akawanda muEurope vane mumuzinda wakanaka (kana maviri) kuzochera ari vashanyi. Ndicho chikonzero zvakaoma kubvumirana chii dzoushe shanu yakaisvonaka kwazvo Europe vane. Ngatidyei Kutarira kwedu pakusarudza The Most Beautiful dzoushe In Europe:
1. Beautiful dzoushe Europe uye France Chateau de Versailles
zvichida Versailles ndeimwe yenzvimbo nomukurumbira nematende munyika, uye zvirokwazvo akakodzera mukurumbira. Zviri chindori remakore rechi18 French unyanzvi, opulent uye akapfuma Kunstwerke uye runako.
Rakanga rakatsaurirwa ne mutongi akakurumbira French Louis XIV, vakatamira zvose dare uye hurumende Versailles mu 1682. The Chateau yaiva nzvimbo huru simba Furanzi kusvikira Revolution mu 1789. Zvino mumwe yakakurumbira nzvimbo nzvimbo munyika.
2. Windsor Castle, nyika dzakabatana
Windsor ari kushanda yamambo uye ndeimwe Beautiful dzoushe mu Europe, dangwe uye kupfuura Castle munyika kuti achine vagari. The British Queen anopedza kwevhiki yake oga Windsor.
Nhoroondo Windsor Castle ndiro rinenge 1000 refu makore. Kwemazana emakore, yave pamba zhinji nhengo inozivikanwa British youmambo. The Castle rine St. George Chapel, kuvigwa nzvimbo madzimambo gumi, uye State Apartments vari yakarongedzwa pamwe Royal Collection pfuma.
3. Grand ducal Muzinda Luxembourg
The Grand ducal Muzinda Rukuzemubhogu muna Luxembourg City ndiro pamutemo yakagara Grand Duke. Iye anorishandisa akawanda yake yebasa mabasa, pamwe Grand Duchess. Mumuzinda rinewo mahofisi avo, uyewo staterooms.
Chivako yakatanga kushandiswa sezvo guta horo shure yakavakwa 1572. mu 1817, chakava yebasa hwomubati. The Grand ducal Palace anotarira Yakanaka Zvikuru muna Flemish Renaissance manyorerwo uye kuti ndechimwe chikonzero chiri pamusoro yedu mazita Most Beautiful dzoushe Europe. Rine rimwe pamadziro yakaisvonaka muguta, uyewo Vakamupfekedza mukati.
4. Neuschwanstein Castle, Jerimani
Neuschwanstein anofanira panzvimbo yayo pakati dzoushe yakaisvonaka kwazvo Europe nokuda kwayo rine runyararo marongero uye mukare akitekicha. Nhare iyi sokunge zvakaitika ngaatarire kubva upenyu hwaAbhigairi ngano. Saizvozvo, rave richishandiswa sezvo rakafuridzirwa nokuda yemauto iri Disney kuti Sleeping Beauty.
Chinhu remakore rechi19 Romanesque Revival mumuzinda. Art kare munyika vanoona mumwe zviratidzo Romanticism. King Ludwig II pamusoro Bmunhuvaria akavaka Neuschwanstein sezvo dzokera shure kwake 1837. Pashure porufu wamambo 1886, zvakava rakazaruka kuruzhinji.
Ulm kuti Fuessen Zvitima
Munich kuti Fuessen Zvitima
Stuttgart kuti Fuessen Zvitima
MuNuremberg kuti Fuessen Zvitima
5. Beautiful dzoushe Europe uye Austria – Castle Schonbrunn
Mumwe inonyanyoshandiswa akashanyira zvisakamboonekwa uye chinonyanya Beautiful dzoushe Europe iri Vienna, Ositiriya, Schonbrunn aivawo World Cultural Heritage Site. Mumuzinda akatanga kuva kuvhima dzichagara pamusoro Emperor Leopold I. It yakavakwa muzana remakore rechi17. Schonbrunn ndomumwe yakanakisisa mabasa murongedzeri Bernhard Fischer of Erlach.
kubvira ipapo, Schonbrunn rakaona kushandiswa sezvo mudare Maria Theresa, pashure chakava musimboti pfungwa uye hondo nyaya ehurumende. Yakavakwa Baroque Style, mumuzinda yave kunyanya zvabatwa ezvinhu ayo yepakutanga. rakasiyana akitekicha Its zvinoita chimwe chezvinhu enchanting nzvimbo kushanyira muEurope.
Kana wagadzirira kuronga rwendo wako vakapoteredza shanu dzoushe yakaisvonaka muEurope, izvi zvaiva nzvimbo haugoni kurasikirwa. Vose dzokugara izvi ingasvikwa nyore Via chitima, saka bhuku matikiti zvenyu uye kutanga kuronga!
Unoda embed yedu Blog pambiru zviende yako nzvimbo, unogona kana kutora mapikicha edu uye rugwaro uye akarurama tipei chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova, kana iwe tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbeautiful-palaces-europe%2F/%3Flang%3Dsn- (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)
#amazingplaces	#chateua	#WindsorCastle	Rukuzemubhogu
Rovedza Kufamba Austria, Rovedza Kufamba Belgium, Chitima Kufamba Denmark, Rovedza Kufamba France, Chitima Kufamba Switzerland, Rovedza Kufamba Matipi, Famba Europe
Business Travel nechitima, Rovedza Kufamba Italia, Rovedza Kufamba Spain, Rovedza Kufamba Matipi, Rovedza Kufamba Turkey, Famba Europe